WARBIXIN: Liverpool Oo Dib U Dhaqaaqaysa Saxiixa Nabil Fekir & Taariikhda Muujinaysa In Uu Fekir Noqon Doono Xiddig Liverpool Ah. – Wararka Ciyaaraha Maanta
WARBIXIN: Liverpool Oo Dib U Dhaqaaqaysa Saxiixa Nabil Fekir & Taariikhda Muujinaysa In Uu Fekir Noqon Doono Xiddig Liverpool Ah.
Kooxda Liverpool ayaa mar kale ku laabatay la soo saxiixashada xiddiga kubada sameeyaha u ah kooxda Lyon ee Nabil Fekir sida ay sheegayaan wararka imanaya Dalka France.
Xiddiga reer France ee Nabil Fekir ayaa ku dhawaaday in uu Reds ugu biiro 53 milyan oo euro 12 bilood ka hor isaga oo xitaa galay sawiradii lagu oo bandigayay ka hor inta ayna Liverpool si lama filaan ah uga bixin heshiiska.
Dhaawac uu xiddigu qabay ayaa sabab u ahaa in uu heshiisku bur-buro iyada oo uu xiddiga ku guulaystay koobka adduunku sii joogay kooxda Lyon halka uuna Jurgen Klopp-na u dhaqaaqin badalkiisa.
Wargayska Le Progrès ayaa haatan sheegaya in kooxda ku guulaystay champions League ay haatan xiiso u qabto la soo saxiixashada xiddiga Nabil Fekir xagaagan.
Fekir ayaa iska sii joogay kooxda Lyon isaga oo xilli ciyaareedkii dhamaaday dhaliyay 12 gool 39 kulan oo uu u saftay kooxdiisa isaga oo ka caawiyay in ay kaalinta 3-aad kaga dhamaystaan horyaalka Ligue 1.
Laakiin 25 jirkan ayaa ka mid ah 3 xiddig oo uu madaxweynaha Lyon ee Jean-Michel Aulas u balan qaaday in ay isaga tagayaan kooxda xagaagan hadii ay kooxo waaweyn dalab ka soo gudbiyaan iyada oo labada xiddig ee kale yihiin Ferland Mendy oo ku biiray Real Madrid iyo Tanguy Ndombele.
Kooxda Lyon ayaa ka war qabta in ayna dalaban karin lacag xitaa ku dhaw lacagtii xagaagii hore marka loo eego in 12 bilood oo kaliya uga hadhsan yahay Fekir heshiiskiisa Lyon.
Taas ayaa la macno ah in ay Liverpool lacag aad u jaban ku heli karto saxiixa xiddiga hadii ay dhab ka tahay in ay helaan adeegiisa inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Tababare Klopp ayaa taariikh u leh in uuna u dhaqaaqin badalka xiddiga uu suuqa ka doonayo laakiin sugo ilaa inta uu isaga ka helayo ama uu iska daayo sanadka kalena dib ugu laabto.
Klopp ayaa sidaas ku helay xiddiga Naby Keita oo ay kooxdiisii hore ee RB Leipzig diiday in ay fasaxdo waxana uu u ogolaaday in ay hal sano sii haystaan isaga oo kala badh lacagtii uu ku iibsanayay sii bixiyay.
Si la mid ah Jurgen Klopp ayaa 6 bilood sugay si uu ula soo saxiixdo daafaca Virgil van Dijk kadib markii ay Southampton ka diiday in ay ka iibiso xiddiga xagaagii 2017.
Fekir ayaa haatan ku socda isla wadadaas iyada oo ay Liverpool haatan dib ugu laabatay saxiixiisa waliba ku heli karta lacag aad u yar inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.